WADANI & UCID oo diiday muddo u kordhinta Siilaanyo & debadbaxyo dhacay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
WADANI & UCID oo diiday muddo u kordhinta Siilaanyo & debadbaxyo dhacay
A warsame 11 May 2015 11 May 2015
Mareeg.com: Labada Xisbi Mucaarid ee Somaliland (WADANI & UCID) ayaa diiday go’aan maanta kasoo baxay Golaha Guurtida, kaasoo mudada u kordhinaya xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Siilaanyo iyo Golaha Wakiillada maamulkaas.
Golaha Guurtida ayaa maanta shaaciyey in muddo xileedka madaxweynaha iyo wakiillada lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 28/7/2015 kuna eg 27/4/2017.
Arrintaas waxaa si kulul uga hadlay gudoomiyaasha labada xisbi mucaarid ee WADANI, C/raxmaan Cirro iyo UCID Feysal Cali Waraabe.
C/raxmaan Cirro ayaa muddo kordhinta ku tilmaamay mid aan dan u aheyn deegaanada Somalilad, wuxuuna carrabka ku adkeeyey ineysana marna qaadan doonin arrintaas.
Sidoo kale, waxaa warbaahinta la hadlay Feysal Cali Waraabe oo sheegay in waxa Golaha Guurtidu ku kaceen yahay khalad, madaxweyne Siilaanyana laga sugayo inussan go’aan qaadan.
Xisbiyada WADANI iyo UCID ayaa raba in doorashada Somaliland la qadbto bisha June ee sanadka 2016, arrintaas oo bishii hore ee April uu soo jeediyey Guddiga Doorashada maamulkaas, beesha caalamkuna u riyaaqday.
Muddo xileedkii Madaxwaynaha Somaliland, Axmed Siilaanyo iyo ku xigeenka Madaxwaynaha, C/raxmaan Zeylici ayaa ku ku eg 27/7/2015 ee soo socota. Sidoo kale, muddo xileedkoodu Golaha Wakiiladda ayaa ku eg 27/7/2015.
Guddiga Doorashooyinka ayaa horay usoo jeediyey muddo kordhin sanad ah oo, iyagoo ku taliyey in doorashada la qabto June 2016, waxaa taas kasii badiyey Golaha Guurtida oo muddo kordhinta ka dhigay sanad iyo bar, iyadoo ka dhigay April 2017.
Dhanka kale, waxaa maanta qaar ka mid ah magaalooyinka Somaliland ka dhacay debadbaxyo looga soo horeejeedo go’aanka Golaha Guurtida, iyadoo mudahaarad xoogan uu ka dhacay magaalada Burco.
Xisbiga WADANI ayaa sheegay in maamulka Somaliland uu xabsiayda dhigaya ilaa 60 qof oo ka mid ah xisbigaas, kuwaasoo si nabad ah fekirkooda u cabirayey, waxaana ka mid ah dadka la xiray mas’uuliyiintii madaxda ka ahaa Xafiiska WADANI ee Laascaanood.
Dabley Muqdisho ku dhaawacay sarkaal ka tirsan Waaxda Socdaalka & Jinsiyadaha Soomaaliya